त्यसपछि वामदेव भैंसेपाटी केन्द्रबाट बालुवाटार फर्किए – LIVE 92 Media
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा केही महिना दुई केन्द्रहरूबीच शक्तिसंघर्ष चल्यो। एउटा सदाबहार केन्द्र बालुवाटार थियो भने अर्को सभामुख छनोट प्रक्रियापछि बनेको भैंसेपाटी केन्द्र। नेकपामा हस्तक्षेपकारी शक्ति बन्दै गरेको भैंसेपाटी केन्द्र विघटन भइसकेको छ। घरमालिक गौतमले आफूसँग रहेको शक्ति पोको पारेर बालुवाटार पुगेका छन्। भैंसेपाटी समूहमा रहेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल कोटेश्वर फर्किएका छन्।
गौतम बालुवाटार फर्किनुको रहस्य के हो? आफूलाई दिइएको भावी प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पनि ‘आकाशको फल’ भएको गौतम आफैंलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसो भए कुन कुराले उनलाई बालुवाटार फर्किन बाध्य पार्‍यो? यसबारे केही भित्री तथ्यहरू केलाउने क्रममा भेटियो बालुवाटारतर्फ मन फर्काउने ‘मन्त्री फ्याक्टर’।
‘हामी मन्त्रिपरिषद्का धेरैजसो सदस्यहरूको सामूहिक आवाज लिएर नेता वामदेव कमरेडलाई भेट्न पुगेका थियौं। सबैजसो शीर्ष नेताहरूलाई फोनमा कुरा गरी पार्टी एकताबाट बचाउन आग्रह गरेका थियौं,’ नेता गौतमलाई भेट्न पुगेका एक मन्त्रीले भने, ‘वामदेवजीलाई भने हामीले भेटेरै कुराकानी गरेका थियौं।’ पार्टी एकता बलियो पार्न परिआए ‘सामूहिक राजीनामा’ समेत दिन तयार भएर उनीहरू शीर्ष नेताहरुबीचको मनमुटाव घटाउन सक्रिय थिए।
Previous Article नेकपा पार्टीभित्रको रडाको
Next Article विप्लव समूहका नेता अनिल शर्मा अस्पतालबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा